Myanmar Monk In The Sky - SgForums.com
22 Apr, 11:08AM in sunny Singapore!
Myanmar Monk In The Sky
1 post since Apr '09
26 Apr `09, 9:27AM
I have copied my friend's message from this link
ဈာန်အဘိဉာဏ်ရ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များအား ဖူးတွေ့ရသည့် ကျွန်တော့်ညီမဆီမှ တစ်ဆင့်စကား
သင်္ကြန်အကျနေ့ ဧပြီလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် သူသည် သိမ်ဖြူကွင်း၌ ကျင်းပသော ရခိုင်သင်္ကြန်မှ အိမ်ကို အပြန်လမ်း၌ ဘက်စကားပေါ်မှ ဈာန်အဘိဉာဏ်ရ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်(၃)ပါးအား ညနေ ၄း၄၅ အချိန်တွင် ဖူးတွေ့လိုက်ရသည်။ မိုးဖွားလေးများ ကျစပြုနေသော်လည်း ကောင်းကင်သည် ကြည်လင်လျက်ရှိ၏လို့ ဆိုပါတယ်။ အရှင်သူမြတ်(၃)ပါးအနက် အလယ်မှ အရှင်သူမြတ်၏ အရပ်သည် ပိုရှည်၏။ ကား လမ်းကြောင်းပြောင်သွားသဖြင့် ၅ မိနစ်လောက်သာ ဖူးတွေ့လိုက်ရသည်။ ဤ ၅ မိနစ်မျှသော အချိန်၌ သူမ၏ သန္တာန်၌ ကြည်ညိုသဒ္ဓါအားကြီးစွာဖြင့် ပီတိလှိုင်းများ ထလာခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ယနေ့ယခုအချိန် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဈာန်အဘိဉာဏ်ရသည့် ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များ မကွယ်ပျောက် မဆိပ်သုဉ်းသည်ကို သက်သေပြလိုက်သည့် မြင်ကွင်းသည် သဒ္ဓါတရား အားနည်းသူကို အားကြီးလာအောင်လည်း ကျေးဇူးပြုသည့်အားဖြင့် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတွင်း၌ ရဟန်းပြုခွင့်ရသော ရဟန်းအရှင်သူမြတ်များဖြစ်၍ ဤဈာန်အဘိဉာဏ်ရ အရှင်သူမြတ်များမှာ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များဟု ဆိုလျင် မမှားနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဈာန်အဘိဉာဏ်ရ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များဟု ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ ယူကျူ့မှ ဖူးတွေ့ရသော ဈာန်အဘိဉာဏ်ရ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်မှာ တစ်ပါးတည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်ညီမ ဖူးတွေ့လိုက်ရသော မြင်ကွင်းနှင့် ဤမြင်ကွင်းမှာ ခြားနားလျက်ရှိနေ၏။ သို့သော် ဈာန်အဘိဉာဏ်ရသည့် ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များ ဤသို့ ဖူးမြင်ခွင့်ရသည်မှာ ကြုံခဲလှသော အခွင့်အရေးတစ်ခုပါတကား…
အကျွန်ုပ်သည် ဖူးမြင်တွေ့လိုက်ရသော အခါ ရင်၌ ပီတိလှိုင်းများ ထ၍ မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထိုပီတိဓာတ်ဖြင့် အကျွန်ုပ်သည် ဤဘဝ၌ ရဟန်းပြုခွင့်ရ၍ ဇာတိဒုက္ခငြိမ်းသည့်အဆင့်သို့ အားထုတ်ခွင့်ရရပါလို၏ ဟု ဆုတောင်းမိပါသည်။ ဆုတောင်းသည် ဆိုသည်မှာ စိတ်ကို ပြဋ္ဌာန်းချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဓမ္မမိတ်ဆွေ ကိုယ်ပြေဇော် ပြောသည့်စကားကို ကျွန်တော် နှစ်သက် သဘောကျသည်။ အခုလည်း ကျွန်တော်သည် စိတ်ကို ပြဋ္ဌာန်းချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ။ ထိုဆုတောင်းသည့် သတ္တိသည် ခန္ဓာစဉ်၌ ကိန်းလျက် ကျေးဇူးပြုမည်မှာ သတ္တိ၏ သဘာဝဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ဦးဇော်သည် ဓားမြှောင်တစ်ချောင်းကို သွေးရင်းဖြင့် ဤ ဓားဖြင့် ဦးမောင်မောင်ကို ထိုးသတ်မည်ဟု ကြံစည်၏။ ဒါသည် စိတ်ကို ဒေါသနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာပဲ၊ ထိုဒေါသဓာတ်သည် ခန္ဓာစဉ်၌ ကိန်း၍ ကျေးဇူးပြုနေ၏။ တစ်နေ့ မောင်မောင်ကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရသည်နှင့် ဦးဇော်သည် ခါးကြားမှာ ဓားကို ဆွဲနှုတ်၍ ဦးမောင်မောင်အား ထိုးသတ်လိုက်သည်မှာ အချိန်အားဖြင့် တစ်မိနစ်မျှသော အချိန်ကာလ၌သာ ဖြစ်သွားသည့် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်၏။ ဤသို့ ကိန်းနေသော သတ္တိသည် တိုက်ဆိုင်သည်နှင့် ကျေးဇူးပြုသွားသည်မှာ ဤသို့သဘောအားဖြင့်သာတည်း။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်း ဤသို့ ဖူးတွေ့ရ၍ ဖြစ်ပေါ်သော ပီတိဓာတ်ကို ဉာဏ်တင်၍ ဆင်ခြင်၍ လည်းကောင်း၊ ခံယူမှုအားဖြင့် စိတ်ကို ပြဋ္ဌာန်းချက်ထုတ်ပြန်ကာ ဆုတောင်းရန် အကြံပေးမျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ခင်ဗျား။
26 Apr `09, 2:05PM
There's no way to tell what those tiny shapes is, and also it's against the monks' Vinaya to demonstrate such powers.
Scania N113CRB l0v3r
6,904 posts since Jul '08
26 Apr `09, 2:09PM
I dun think maybe itabird?
76 posts since Apr '09
26 Apr `09, 10:35PM
I have also heard of stories of monks flying in the sky, monks floating above ground perpetually to avoid stepping on any insects in Myanmar. However, since I have never seen it before, I can't say for sure if it exists or not. Nevertheless, what can be said is that there are many accomplished practitioners in Myanmar, meditating well into the jhanas. Those whose meditation are in the jhanas have the some ability to perform such acts. However, the ability to do so doesn't mean anything. Devadatta, Buddha's cousin who tried to kill him also had such abilities but he had not true understanding and wisdom. As such, i think it might be better not to be bothered with such things, there are many more unimaginable things in the world.
3,425 posts since Jul '05
27 Apr `09, 9:02PM
Devadatta gain such abilities in 1 night of practice
1 Users Online SBS8676Z